Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Gulaha Fulinta JWXO oo shalay qabsoomay iyo Gudoomiyaha oo Hambalyo iyo Dardaaran u diraya shacabka S.Ogadenya
Shirkii Gulaha Fulinta JWXO oo shalay qabsoomay iyo Gudoomiyaha oo Hambalyo iyo Dardaaran u diraya shacabka S.Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ December 29, 2013
Golaha Fulinta ee JWXO ayaa shirkoodii caadiga ah isugu yimid Sabtidii, shirka oo ku soo beegmay dhamaadka sanadka 2013ka ayaa waxaa shir-gudoominayay Gudoomiyaha Jabahdda oo xubnaha soo hordhigay ajendaha shirka lagaga hadlayo warbixinadii iyo kala xog-qaadashada ka dib.
Qodobada ugu mihiimsanaa ee sida fiican loo lafa-guray waxaa ka mid ahaa qiimaynta hawlaha halganka sanadka 2013ka iyo hawlaha muhiimka ah ee sanadka 2014ka ay tahay in la qabto.
Ugu horeyn Gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee halganka ku xeeran iyo waxyaabihii u qabsoomay ururka gude iyo dibadba sanadka dhamaaday ee 2013. Wuxuu Gudoomiyaha tilmaamay dhaliilaha jira iyo siyaabihii looga hortagi lahaa, isagoo qodobeeyay shirqooladii gumaysiga ee sanadka 2013.
Wuxuu Gudoomiyaha hambalyo u diray guud ahaan shacabka Somaliyeed ee Ogadenya sida geesinimada lehee ay isaga caabinayaan gardarada gumaysiga. Wuxuu gudoomiyaha si gaar ah hambalyo ugu diray CWXO oo samriyay ciidamada cadawga taasoo ka muuqata falalka argoosiga ah ee shacabka aan waxba galabsan ay kula dhaqmayaan. Wuxuu hoosta ka xariiqay Gudoomiyaha in calaamadaha lagu garto halganka socda iyo guuldarada soo gaadhayas cadawga ay ugu horeyso falal dambiyeedka uu ka galayo shacabka ee aargoosiga ah.
Wuxuu ugu baaqay Gudoomiyaha shacabka S.Ogadenya inay xasuustaan dardaarankii Ilaahay ee ahaa Ina Macal Cusri Yusran, taasoo culumada ay ku fasireen in guusha la fisho marka uu culayska ugu badan yahay. Sabir iyo Ilaahay oo la-tala saarto ayuu kula dardaarmay Gudoomiyaha dhamaan shacabka halgamaya Gude iyo Dibadba.
Intaa ka dib; Waxay xubnaha GF ururka isla eegeen falal dambiyeedka uu gumaysiga ka wado dalka iyo dhibaatada uu ku hayo dadka shacabka. Waxaa la akhriyay warbixinno xasaasi ah oo Xarunta Dhexe ee JWXO laga soo gudbiyay oo muujinaya falalka argagixiska ah ee gumaysiga iyo adeegayaashiisa ay ka wadaan dalka kuwaasoo ah dambiya dagaal iyo dambiyo ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha ee shacabka. Falanqayn qota-dheer ka dib waxaa la’isla qaatay go’aano ka hortag ah iyo in loo soo bandhigo caalamka dambiyadaa laga galayo shacabka S.Ogadenya ee la doonayo in lagu qasbo Gunnimada Gumaysiga Itobiya.
Shirka oo socday in kabadan 4saac ayaa lagu qaatay go’aano dhaxagal ah iyo hawl qaybsi gude iyo dibadba.